हामी सोच र कुरा गरेर दुनिया मा समस्याहरु लाई हल गर्न सक्दैन, तर यस तरिका मा: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
हामी सोच र कुरा गरेर संसारमा समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौं तर यस तरिकामा:
मा दायर सिमुलेशन	by मार्टिन भिजल्याण्ड	21 जून 2019 मा	•3टिप्पणिहरु
पहिले मैले Roald Boom बाट एक भिडियोलाई उल्लेख गरें, जुन म व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन, तर मैले कुन 1x भन्दा पहिले YouTube भिडियो हेर्नुभयो। तलका बोलीमा (जुन मैले प्राप्त गरे), रोल्ड मेरो स्वादमा सारको नजिक आउछ। उनी भन्छन् कि आइंस्टीनको बयान 'हामी एउटै स्तरको सोचबाट समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ"मा बदलिनु पर्छ"हामी चेतनाको एक नै स्तरबाट समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ"। उनले एक उत्कृष्ट र संक्षिप्त तरिका मा व्यक्त गर्दछ जो मैले हाल को वर्षहरु को लेख मा स्पष्ट गर्न को प्रयास गरेको छ, जहां म पहिले उनको सामूहिक मीडिया सम्मोहन देखि पाठक जगाने को कोशिश गर्छन र फेरि चेतना को आवश्यक स्तर को दिशा मा बदलाव गर्छन। यही कारण छ कि म यहाँ आफ्नो भिडियो प्रयोग गर्न चाहन्छु, जसलाई म केहि थप दिन चाहान्छु, ताकि तपाइँ आशा राख्नुहुनेछ कि तस्वीर पूर्ण रूपमा देख्नेछ।
हाम्रो ब्रह्मांड र अस्तित्वबाट कहाँ आएको छ?
एक राम्रो समझको लागि यो हाम्रो उत्पत्ति को सार को वर्णन गर्न को लागि पहिलो उपयोगी छ। म तपाईलाई सोध्छु कि तपाईका विश्वासहरू अस्थायी रूपमा एक विचार प्रयोगको लागि प्रतीक्षा कोठामा राख्नुहोस्। तपाईं एक रचनात्मक ईश्वरीय वा ठूलो बुबामा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुवै मा एक सत्य छ। पहिलो, गरौं एक अवधारणा मान्य बनाउनुहोस्; केवल व्यायामको लागि, ताकि म 'सिर्जना' वा 'ठूलो बान्ग' विश्वास प्रणालीमा फर्कन सक्छु। हामीलाई मानौं कि सबै कुराको उत्पत्ति जानकारीको कुल प्रवाह हो जसको सबै कुराले बनाएको छ र जानकारीको यो कुल समावेशी प्रवाहको सार तत्व हो जसबाट सम्बर्धन भएको छ। हामीलाई भन्नुहोस् कि यो सबै सम्भावनाहरु र सम्भावना को एक प्रकार को समुद्र हो जुन कुरा देखि सबै कुरा को ऊर्जा मा, रूप र निर्दोष हुन्छ। अस्तित्व को एक प्रकार को सेल, ब्रह्मांड र सबै कि। यो स्टेम सेल संग तुलना शायद सबै भन्दा राम्रो छ, किनकि यो कसरी सम्भव छ कि मानव शरीर मा यो स्टेम सेल पनि शरीर को हरेक भाग को लगभग सबै जानकारी समावेश गर्दछ। त्यसोभए रोल्ड बोमले भिडियोमा 'क्वांटम फील्ड' लाई के भन्छ, म त्यो शब्द 'स्टेम सेल' लाई लिंक गर्न चाहन्छु। तपाईंले भिडियो हेर्दा यो स्टेम सेल तुलना याद गर्नुहोस्।
सिर्जना वा ठूलो बुबा?
यदि हामी एक क्षण को लागि मानिन्छ कि अस्तित्व को त्यो स्टेम सेल देखि (म सजगता देखि नहीं ब्रह्मांड, जसलाई अधिक को बारे मा) को रूप मा बनाइयो छ, तब मुख्य प्रश्न अझै पनि छ: "त्यो स्टेम सेल कसरि भयो?" त्यसैले: "सबै समावेशी डेटा स्ट्रिम कसरी (क्वांटम फिल्ड) सुरु भयो जसबाट सबै कुराले बनाएको हो?"
यहाँ उल्लेखित नमूना (विचार सोचेको प्रयोगमा) मैले एक क्षणको लागि मान्छु कि व्यक्तिगत संस्थाहरूले (कक्षहरू) गठन गरेको छ। व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्रहरू जसको बदमामा बढी आकार दिन आवश्यक छ। धर्म सत्यको नजिक यो अर्थमा छ, किनभने यहाँ देवता, स्वर्गदूतहरू र राक्षसहरू (व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्रहरू, रूपहरू, संस्थाहरू) को कुरा पनि बोल्दछ। सुविधाको खातिर, हामी यो 'व्यक्तिगत कक्ष' वा 'डिजाइनर' लाई बोलाउछौं। म यहाँ ठूलो पट्टि बनाउँछु, तर यदि हामीले मान्नेछौ भने 'सबै' बाट ('सबै समावेशी स्रोत कोड', 'स्रोत ऊर्जा फिल्ड' वा 'सूचना प्रवाहको स्रोत', 'क्वांटम फिल्ड') फारम उठाइन्छ, त्यसपछि हामी हाम्रो शारीरिक संसारमा यो भन्दा राम्रो तुलना स्टेम सेल हो।
स्टेम सेल भित्र सबै भ्रामक कोड आकार गर्न चाहानुहुन्छ जुन हामी समावेश गर्न सक्दैनौं, तर यो हुन्छ। कक्षहरू तिनीहरूको डिजाइन प्रक्रिया स्टाम सेलबाट जानकारी सुरु गर्छन्। यसैले हामी भन्न सक्छौं कि जानकारी प्रवाहको सबै-निस्क्रिय 'स्रोत' स्वाभाविक रूपले आकार (सिर्जना गर्न) प्रदान गर्न इच्छुक छ। यो जानकारीको सबै-घिमिरे प्रवाह शायद हाम्रो अस्तित्व को सार हो। देवताहरू वा संस्थाहरू (कम्तीमा: हामी हाम्रो धारणाको संसारबाट के भन्छौ) त्यसपछि यसको जानकारी हो कि सबै अनुकूली प्रवाह। यी पहिले नै फारामहरू छन्। यो पहिले नै चिनारी सेल जानकारी प्रवाहबाट निर्मित "कक्षहरू" हो।
यो प्रश्नको जवाफ दिन हामी एक रचनामा रहन्छौं वा विकासद्वारा गठित एक ब्रह्मामा ठूलो ब्गबाट, हामीलाई क्वांटम भौतिकीमा लाग्न पर्छ। प्राकृतिक वैज्ञानिक नीलसन बोहर द्वारा डबल-स्लिट प्रयोग को 'फाउंडेशन को सबै चीज' (TOE) को आधार को आधार मा आइंस्टीन को काम को हल्लाया। यो पनि पूर्ण रूपमा आइंस्टीनको थ्योरीहरू (जस्तै स्थानीयता को सिद्धान्त र लाइट-जस्तो-किनाराको गति क्वांटम इन्ट्यागमेन्ट परीक्षणको परिणामको रूपमा गति) लाई मेटाइयो। नीलस बोहरले साथ दिए डबल स्लिट्स प्रयोग कि एक पर्यवेक्षक को मामला बनाउन को लागि आवश्यक छ। त्यस अघि, यो केवल एक सूचना प्याकेज हो। यो निष्कर्षमा पुग्छ कि हामी एक सिमुलेशन हकीकतमा बस्छौं (जहाँ 'जिन्दगीमा' वास्तव मा एक सही ढाँचा होइन), जसमा बाह्य पक्षलाई अभिव्यक्ति खेलाडी (बहुविध सिमुलेशनमा)। यस निष्कर्षको व्यापक पर्याप्तता लेखको यस श्रृंखलामा फेला पार्न सकिन्छ (हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ).
अब यो "स्टेम सेल" जानकारी प्रवाहबाट (यदि रोल्ड बोमले "क्वांटम फिल्ड" लाई "फारम" भनिन्छ) को गठन गरेको छ, त्यसपछि हामी यो "फारम" रचनात्मक कक्षहरू जुन फेरि फेरि सिर्जनाको प्रक्रिया सुरू गर्न सक्दछौं (जस्तै शरीरको अंग र अंगहरू)। त्यसोभए हामी यो भन्न सक्छौं फारम संस्थाहरू हाम्रो चेतना बनाउनुहोस्। अनावश्यक सबै-अनुकूल डेटा स्ट्रीम (अस्तित्वको स्टेम सेल, क्वांटम फील्ड), 'फारम' गठन भयो। हामी त्यो पहिलो 'फारम' 'चेतना' वा 'आत्मा' वा 'इकाई' कल गर्न सक्दछौं। यी सबै शब्दहरु आध्यात्मिक र धार्मिक आंदोलनमा प्रदुषित छन्, तर सुविधा सुविधाको लागि मात्र 'चेतना' छनौट गर्नुहोस् फारम त्यो गठन भएको छ। त्यसैले पहिला त्यहाँ 'सबै' र त्यसपछि चेतना थियो। सचेतना तब स्टेम सेलबाट बनाइएको एक व्यक्ति हो। यद्यपि, दुवै एक हो किनकी एक अर्कोको परिणाम हो, तर सेल स्टेम सेल जानकारी (सबै समावेशी डेटा स्ट्रिम बिना) बनाउन सक्दैन। यसैले दुवै सधैं साथ नै अवस्थित हुन्छ।
यस पैसा रात व्यायाममा हामी अधिक फारम (अंग बनाउनका लागि) संस्थाको लागि (चेतना / फारम) को आवश्यकतामा छलांग बनाउन सक्दछौं। अब हामी हाम्रो 'जैविक' भौतिक वास्तविकताबाट जान्दछौं कि खराब कक्ष पनि बनाउन सक्छ। यदि हामी मानव शरीरलाई हेर्छौं, यो धेरै सिद्ध छैन कि हामी बिरामी छैनौं। तथापि, एक भाइरस पनि प्रणालीको परीक्षण हुन सक्छ र प्रतिरोध बढाउन सक्छ।
हाम्रो विचार व्यायाममा, हामी एक क्षणको लागि मानौं कि हाम्रो चेतना लाई स्रोत कोड (स्ट्याम कक्ष / क्वांटम फिल्ड) बाट सीधा बनाइएको छ र हामी यसैले सबै एक समान स्तरबाट आउँछौं, तर सबै फरक मिशनको साथ। सबै पछि, एक शरीरमा एक कक्षले स्टेम सेलबाट जानकारीको आधारभूत प्याकेज एक अंग र अन्य अंगको रूपमा लिईएको छ। हामी एक बराबर समकक्ष स्तर हो, तर त्यहि होइन, किनकि हाम्रो फरक डिजाइन मिशन छ।
यदि तपाईंले मेरो लेख अनुकरणको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने, म बिन्दु चाहन्छु कि त्यहाँ एक इकाई (चेतनाको रूप) जस्तो देखिन्छ जुन भाइरस प्रणाली निर्माण गर्ने काम लाग्दछ। स्टेम सेलबाट बनाइएको सम्पूर्ण शरीरको लागि एक प्रकारको परीक्षण प्रणाली। चेतनाको यो लुसिफरियन रूपले एक (भाइरस) सिमुलेशन बनाएको छ। आखिर, क्वांटम फिजिसनले हामीलाई "अनुकरण" / अनुकरणमा "जीवित" देखाउँछ। त्यस अवस्थामा, लुसिफर यो अनुकरणको देवता (बिल्डर) हो। यसले दुवै सृजना कथा र ठूलो ब्ङ्गोल सिद्धान्त बताउँछ कि अधिक वा कम हदसम्म। ठूलो ब्क को मामला मा तपाईं भन्न सक्छ कि यो पल मा सिमुलेशन स्विच हुँदा यो क्षण थियो। "पफ!" अचानक सबै त्यहाँ थियो। सृजन कथाहरूले तहहरूको वर्णन गर्दछ जुन पहिलो अनुकार बनाउँछ (पहिलो उज्यालो र अँध्यारो, त्यसपछि स्वर्ग, पृथ्वी, भूमि, समुद्र र यति)। विकासको सिद्धान्त सिमसँग तुलना गर्न सकिन्छ जुन तिनीहरूका सिम संसारमा हुन्छन् (हेर्नुहोस् यहाँ) आफ्नो अस्तित्व को उत्पत्ति को खोज र उनको सिम चेतना र धारणा देखि ऐतिहासिक विश्लेषण गर्न को प्रयास गर्नुहोस।
यदि तपाइँ मेरो लेख पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि हामी ढोकामा छौं चेतनाको रूप (जसले हाम्रो सिम वास्तविकताबाट "देवता" को रूपमा सम्मानित गर्दछ र को रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ) लुसिफर निर्मित भाइरस नक्कल जीवन। तपाइँले यसलाई परीक्षण प्रणाली पनि बोलाउन सक्नुहुनेछ; एक भाइरस प्रणाली जुन चेतना (कक्षहरू) को अन्य रचनात्मक रूपहरू परीक्षण गर्ने उद्देश्य हो। हामी न केवल क्वांटम भौतिकी प्रयोगहरू पहिचान गर्न सक्दछौं यो यो एक अनुकरण भाइरस परीक्षण प्रणाली हो, तर लिपि र दुल्हन पनि। म त्यो व्याख्या गर्दछु यो महत्त्वपूर्ण लेख (म साँच्चै सिफारिस गर्दछु कि तपाईं यो सावधानी सावधानी पढ्न सक्नुहुन्छ)।
सबै अनुचित जानकारी प्रवाह, क्वांटम फील्ड
रोल्ड बूमले यो सबै-निस्पष्ट जानकारी प्रवाहलाई बोलाउँछ (जुन सुविधाको लागि स्टेम सेलको तुलनामा छ) क्वांटम फील्ड। त्यसो भए पछि क्वांटम फिल्ड सिंगलिटी आउँछ। यसमा 'एकल' शब्द छ, जुन अर्थ 'व्यक्तिगत' हो। यदि हामी स्टेम कक्ष हेर्छौं र कसरी विभिन्न एकल कोशिकाहरू विभिन्न कार्यहरूसँग शरीरमा वा प्रत्येक जैविक रूपमा रूपबद्ध गर्दछौं, त्यसपछि तिनीहरू व्यक्तिगत रूप हुन्; व्यक्तिगत संस्थाहरू जुन क्वांटम फिल्डबाट बनेको छ (स्टेम सेल जानकारी प्रवाह)। त्यो स्तरमा, एक अब अर्को जस्तो छैन। एकसँग अर्को गठन मिशन मिल्दो छ। यदि लुसिफर इकाई द्वारा बनाईएको सिमुलेसनको भाइरस प्रणालीले अन्य कक्षहरूलाई उनीहरूको बलको लागि परीक्षण गर्न उद्देश्य राख्दछ, त्यसपछि हामी कोडलाई क्वांटम फिल्डमा फेला पार्न सक्छ जुन यसले भाइरसलाई तोड्न सक्छ।
सबै पछि, हामी सबै किन्नत डेटा स्ट्रीमबाट उत्पन्न गर्छौं (क्वांटम फील्ड / स्टेम सेल जानकारी स्ट्रिम)। यसैले यदि हामी सिम्स अनुभव वा अवतार अनुभवबाट सिम अनुकरणको समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं, हामी यस प्रकार भित्रबाट खेल परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यो सम्भव छैन। सिमुलेशनको बिल्डरले सधैं "कार्यक्रम" विजयलाई सुनिश्चित गर्नेछ। तपाईंको विचार र मस्तिष्क पनि खेलमा तपाईंको सिमको भाग हो; अनुकरणमा तपाईंको अवतार; तिम्रो शरीर विचार। तपाईं तपाईंको शरीर होइनौं: तपाई चेतना हुनुहुन्छ (स्टल सेल सेल प्रवाह / क्वांटम फिल्डबाट उत्पन्न हुने एकल प्रपत्र हो)। सिमुलेशन समायोजन वा रोक्नको एकमात्र तरिका यो प्रोग्राम स्तरमा गर्न को लागी हो। यसैले एकलता (व्यक्तिगत / एकल इकाई प्रपत्र) स्तरमा हुन्छ, जहाँ सबै इकाई फारमहरू बराबर छन् तर फरक मिशन छ। त्यस स्थितिबाट हामी आधारभूत जानकारी प्रवाहमा ट्याप गर्न सक्छौं।
चेतना स्तरमा भाइरस नियन्त्रण
तपाईं पनि यो सिमुलेशन मा समस्याहरु को बारे मा चिन्ता छैन कि भन्न सक्छ, यो एक भाइरस प्रणाली को इरादा को लागि थिएन: यो परिक्षण र मरम्मत गर्न। तपाईंको शरीरले भाइरस आक्रमणलाई पनि जीवित राख्न सक्छ। तपाईंको चेतनाको रूप (आत्मा वा जुन जसो तपाइँ यसलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ) त्यसकारण एक भाइरस आक्रमण पनि बाँच्न सक्छ। यद्यपि, हामी सोचा कि हामीले सिम अवतार स्तरमा यो गर्नुपर्छ। त्यो बराबर यद्यपि, यो आफैमा एक सिम स्तर हो। यो त्यो भाइरस सिमुलेसनको भाग हो। भाइरस प्रणालीको विजय भाइरस सेलमाथि आक्रमण गरेर गरे। भित्रबाट होइन, तर बाहिरबाट। लूसिफरको इकाई, जसको काम यो चेतनाको अन्य रूपहरू आफ्नो शक्तिको लागि परीक्षण गर्न र यो भाइरस नक्कल बनाइयो, यसैले इकाई स्तरमा टकलिएको हुनुपर्छ। त्यसैले यो चेतनाको स्तरमा हुन्छ।
यदि रोल्ड बूम भन्छ कि सबै रूपहरू सँगै सँगै हुन्छन्, त्यसपछि यो पुरा तरिकाले सही छ। यसलाई प्लेस्टेशन खेलको चित्रमा राख्नुहोस् वा aforementioned सिम्स खेल। मानौं कि धेरै चेतना संस्थाहरू (आत्मा वा जुन तपाईं यो कल गर्न चाहानुहुन्छ) ले लुसिफेरिया भाइरस प्रणालीमा राखिएको छ। यस्तो बहु खेलाडी खेलका खेलाडीहरू को हुन्? बहु खेलाडी प्लेस्टेशन वा सिम खेलको खेलाडीहरू कौन हुन्। यी मानिसहरू हुन् जुन सोफेमा नियन्त्रकसँग स्क्रिनमा हेर्दैछन्। त्यसैले तपाईंको चेतना देख्छ र यो भाइरसको प्रणाली सिमुलेशनमा साथ खेल्दछ, तर एकै समयमा सेल स्टेम सेल क्वांटम फिल्डबाट आउँछ। तपाईं अझै पनि चेतना हुनुहुन्छ र तपाईं क्वांटम फिल्डमा हुनुहुन्छ। सबै चीजहरूको समाधानको सार भागमा क्षेत्रमा छ।
यो थप सरसफाइ राख्नका लागी निम्न इमेजरी हुन सक्छ: यदि तपाइँ तपाइँको पर्दामा टाइपटो बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँ टाइपक्समा स्क्रिनमा राख्नुहुन्छ, मेट्नुहोस् उठाउनुहोस् र तपाईंको पर्दामा अक्षर मेटाउन वा यो शब्द प्रोसेसर स्तरमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? त्यसैले हामीले क्वांटम फिल्डमा समाधान खोज्नु पर्छ। यसैले मलाई लाग्छ कि रोल्ल बूमको तल रहेको भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
शब्द "एकल" शब्द को उपयोग को ट्रांहनुमानवाद को धाराहरु द्वारा अपनाईएको छ र Google को टेक्निकल प्रमुख को द्वारा प्रचारित गरिएको छ। रे Kurzweil। यो लुसिफरियन भाइरस सिमुलेशन प्रणालीको खतरा हो, जसमा युनिवर्सिटीको पछिल्लो अवस्था भाइरससँग फ्युजनको पथको माध्यमबाट प्रमोशन गरिन्छ। यो सबै को साथ संलयन को माध्यम ले जान्छ र मानव शरीर अवतार को साइबर्ग्स मा क्रमशः परिवर्तन डीएनए र दिमाग संग क्लाउड मा समाप्त हुनु पर्छ। मेरो चेतावनी यसैले छ कि हामी यस ट्राफुमनमनवाद र यो झूटो गणना, न त नै धर्मको साथ कनेक्ट हुनु हुँदैन, किनकि हामी आफैलाई लुसिफेरियन भाइरस प्रणालीमा लिङ्क गर्न चाहन्छौं जसले स्वयं क्वांटम क्षेत्रमा घुमाउन चाहन्छ। हामी यो लुसिफेरियन भाइरस प्रणाली को चेतना, शुद्ध एकलता र क्वांटम फिल्डबाट हटाउन सक्दछौं। त्यसैले मेरो सल्लाह रोल्ड बूम जस्तो छ: अझै सकेसम्म र तपाईंको चेतनाको सम्झना सम्झनुहोस्.
म पनि नोट गर्छु कि 'ब्रह्मांड' ले लुसिफरियन सिमुलेशन अनुभवको भाग हो (जस्तै माथि स्वर्गदूतहरू, राक्षसहरू वा माथि उल्लेख गरिएका जेन्सनहरू जस्तै: यहाँ हेर्नुहोस्), तर अन्यथा म रोल्डको व्याख्यालाई माया गर्छु।
धेरै पाठकहरूका लागि, माथिको पूर्णतया मायालु भाषा हुन सक्छ। चेतनाको आत्माको लागि, पनी सम्भव छ।
हैक गरिएको नक्कल अनुमोदन
किन लुसिफेरियनवाद, जादूगर र ट्राजीग्रेडिज्म मुख्य धारा हो
तपाईको वरिपरी धेरै मानिसहरु को शाब्दिक सूक्ष्म (अञ्चल निकाय) हो?
ट्याग: जागरूकता, चेतनाको स्तर, उछाल, बराबर, denkniveu, विशेष, विचारहरू, क्वांटम फिल्ड, लुगेरिया, स्तर, बडा बंग, धर्म, Roald, रोल्ड बूम, सिर्जना, अनुकरण, singularity, भिडियो, उस्तै
21 जून 2019 मा 16: 32
यस एआई एजेन्डा मा प्रमुख वैश्विक खेलाडीहरु idd Kurwewe, तर एरिक Schmidt (वर्णमाला) र पीटर थियेल पनि। अनुहार राख्नको लागी ...
विश्वको ज्ञानको किनारमा आइपुगेको, सबै भन्दा जटिल र परिष्कृत दिमागहरू खोज्नुहोस्, तिनीहरूलाई एक कोठामा राख्नुहोस्, र उनीहरूले आफैलाई सोध्ने प्रश्नहरू एकअर्कालाई सोध्छन्।
22 जून 2019 मा 15: 02
रोचक लिंक सामन, बस हेर्नुहोस जहाँ सामान्य Mengele Plasterk काम गर्दछ संदिग्ध ... Impatient / Mytommorows
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ
23 जून 2019 मा 18: 06
यस प्रबुद्ध टुक्राको लागि धन्यवाद, अर्को पहेली टुक्रा!
« अन्जा स्काप Wadden आइलैंड्स भन्दा माथि समुद्री मा मृत फेला पर्यो, तर कुन जहाज (myshiptracking.com)?
डच अवस्थामा उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी छैन: स्ट्यानफोर्ड जेल प्रयोग »
कुल भ्रमण: 11.606.711
5G खतरनाक छ र यो कसरी गोप्य रूपमा स्थापित छ
इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्दछन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि संघर्ष गर्दैछन्।
किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ
जेफ्री एपस्टाइनले आफ्नो सेलमा आत्महत्या गरे (अपडेट)
विल्फ्रेड बेकर op प्रजातन्त्र फोरम डेमोक्रेसी (FvD) पराजयको लागि
क्यामेरा2op प्रजातन्त्र फोरम डेमोक्रेसी (FvD) पराजयको लागि
क्यामेरा2op किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ
बार्टोलोलो op इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्दछन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि संघर्ष गर्दैछन्।
डैनी op 5G खतरनाक छ र यो कसरी गोप्य रूपमा स्थापित छ
1.612 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्